रेडियो तमोर १०२ मेघाहर्ज अरूण साहले किन पाएनन् आम माफी ?
अचेल सधैँ कारागाबाट एकजना सहयात्रीको फोन आउने गर्छ । सुखदुःखका कुराहरू सुनाउने गर्छन् । कुरा सुनिदिनुपर्ने र समस्या बुझिदिनुपर्ने हुन्छ । वर्गीय एक सहयात्रीको नाताले आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गरिदिनुपर्ने हुन्छ । उनी सधैँ एउटै उत्साहित कुरा गर्छन् ।
वर्ग सत्रुसँग कहिल्यै नझुक्नु, म छिटै छुट्ने छु । अब धेरै दिन छैन । नियमले नै छुट्ने छु । जेल पनि जीवन हो र जीवन पनि जेल हो । यो जीवन सबैले पाउँदैनन् । पाउनेले भोग्दैनन् । नपाउनेले भोग्छन् । कानुन कार्यान्वयनमा समस्या छन् । शासकको नियतिमा समस्या छन् । सत्तामा समस्या छन् । त्यसैले जेलभित्र पनि समस्य छन् । जेलमा हुनुपर्ने मान्छे जेलमा छैनन्, जेलमा नहुनुपर्ने मान्छे जेलमा छन् । कानुन नबदलिए जेल कसरी बदलिन्छन ? जेलै नबदलिए मान्छे कसरी बदलिन्छ ? मान्छे नबदलिए संसार कसरी बदलिन्छन् ? संसार नबदलिए युग कसरी बदलिन्छ ? जेलको सदुपयोग छैन । कैदीको उपयोग छैन । त्यसैले जेल जेल जस्तो छैन । कानुन कानुन जस्तो छैन । बल्ल थाहा भयो सत्ताका लागि राजनीतिक छलकपट । राजनीति यस्तै हुँदो रहेछ । हुने कुरा नहुने, नहुने कुरा हुने । यही राजनीतिको रङ्ग हो । जीवन बाँच्नेको ढङ्ग हो ।